Qarax ayaa la sheegay in lagu weeraray gaadiid uu la socday Taliyaha Ciidanka Militariga… – Hagaag.com
Qarax ayaa la sheegay in lagu weeraray gaadiid uu la socday Taliyaha Ciidanka Militariga…
Qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray gaadiid uu la socday Taliyaha Ciidanka Milatariga Soomaaliya General Odawaa Raage.
Weerarka lagu qaaday Taliyaha Milatariga ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa isgooska Tarabuunka iyo Isbitaalka Xoogga, waxaana wararka aan helnay sheegayaan in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay gaarigii uu la socday Taliyaha.
Saraakiil katirsan Ciidanka Milatariga ayaa noo sheegay in General Odawaa ka badbaaday qaraxa lala beegsaday, waxaaba goobta ka kaxeeyay ciidamo katirsan milatariga Soomaaliya oo geeyay goob ammaan ah.
Taliyaha Milatariga Soomaaliya ee qaraxa lagu weeraray ayaa la socday gaari nuuca aan xabaduhu karin, waxaana qaraxa kahor inta aan gaariga Taliyaha lagu dhufan isku dayay in uu ka celiyo gaari Cabdi bille ah oo ilaalo ka hayay Taliyaha.
Waxaa jira Khasaaro qaraxa kasoo gaaray qaar kamid ah Ciidamadii ilaalinayay Taliyaha Ciidanka Xoogga Soomaaliya, waxaa sidoo kale qaraxa uu waxyeelo kasoo gaaray dad shacab ah oo ka agdawaa goobta uu qaraxu ka dhacay.